‘डार्क सर्कल’ हटाउन खानुहोस् ! यस्ता भिटामिन पाइने खानेकुरा – Samacharpati
‘लकडाउन’ उल्लङ्घनकर्तालाई प्रहरीले जहाँ भेटिन्छ त्यहाँ केही घण्टा ‘होल्ड’
चीनले कोरोनाले निम्त्यिाएको संकटको कसरी सामना गर्‍यो ?
‘डार्क सर्कल’ हटाउन खानुहोस् ! यस्ता भिटामिन पाइने खानेकुरा
काठमाडौँ, २९ जेठ । बढी काम गर्ने, तनाव लिने, पर्याप्त नसुत्नेलगायत कारणले आँखावरिपरि ‘डार्क सर्कल’ देखापर्ने गर्छ । यसले मानिसको समग्र सुन्दरतामै ह्रास ल्याउँछ । डार्क सर्कल हटाउन यी भिटामिन पाइने खानेकुरा खानुपर्छः
पोखराको फिर्के खोलाको कारण सम्बन्ध विच्छेद भयो, आखिर कसरी हेर्नुहोस !
पोर्चुगलमा नविनले गरे नेपालीहरुकालागी सहयोगको घोषणा